३५ बर्ष कटे पछि किन बिवाह गर्न मन लाग्दैन ? यस्तो छ कारण ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
३५ बर्ष कटे पछि किन बिवाह गर्न मन लाग्दैन ? यस्तो छ कारण !
विवाह गर्ने सही उमेर कुन हो ? भूगोल, रितिरिवाज, समाज अनुसार यस को जबाफ मा एकरु-पता नहुन सक्छ । हामी कहाँ यसको रेडिमेड जवाफ छ, ‘आफ्नो खुट्टा मा उभिने भए पछि ।’ अर्थात आफ्नो कमाइ मा आश्रति हुन सक्षम भए पछि बिहे गर्न सकिन्छ । तर, शरीर विज्ञान, सामाजिक अवस्था आदिले यसो भन्दैन । बिवाह को निर्धारण आर्थिक सुरक्षा ले मात्र गर्ने होइन । यस मा निश्चित उमेर समूह ले खास महत्व राख्छ ।
किन २० बर्ष पारी, बिहेवारी ?
एउटा उमेर पार गरिसकेपछि बिवाहको जुन रस र रौनक हुनु पर्छ, त्यो रहँदैन भनिन्छ । एक अध्ययन ले यसै भन्छ । त्यसैले हामीकहाँ २० बर्ष पारी बिहेवारी भन्ने गरिन्छ । खासगरी महिला को हकमा यसो भनिएको हो । २० बर्षपछि महिलाहरु शारीरिक रुपले परिपक्क हुन्छन् । उनीहरुको यौनाङ्ग र प्रजनन अंगको राम्ररी बिकास भइसके को हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चा जन्माउनु सुरक्षित हुन्छ । साथै मानसिक रुपले पनि उनीहरु परिपक्क हुन्छन् । अर्कोतिर पढाई र करियरलाई पनि यसमा जोडिएको छ ।
केटाहरु को हकमा उनीहरु आर्थिक रुपले सवल वा पारिवारिक दायित्व बहन गर्न सक्षम हुनुपर्ने अघोषित मान्यता छ । अतः २५ देखि ३० बर्षभित्र बिहे गरिसक्नुपर्ने धारणा हामीकहाँ व्यप्त छ । यो भन्दा कम उमेरमा अपरिपक्क हुने र त्यसभन्दा माथि भएपछि पारिवारिक जीवन एडजस्ट गर्न गाह्रो हुने आम बुझाई छ ।
३५ वर्षको उमेर कटेपछि भने महिला वा पुरुषमा विवाहको इच्छा मर्दै जाने एक अध्ययनले देखाएको छ । शहरी पृष्ठभूमिका ३५ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका एक सय व्यक्तिहरुमा सो अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा अधिकांस पुरुष र महिलाहरु ले स्वीकारे का थिए कि उनीहरुमा विहेको रहर मरिसकेको छ ।
आखिर ३५ वर्ष कटेपछि महिला-पुरुषमा के हुन्छ जसले विवाहप्रति उदासिन बनाउँछ ?
१. हरेक सम्वन्धका केही सीमाहरु हुन्छन्, जसले व्यक्तिलाई बाँधेर राख्छन् । तर, कुनै सीमाबिना ३५ सम्म बाँच्नुहून्छ, त्यसपछि अचानक बिहे गरेर सीमाभित्र बाँधिन गाह्रो हुन्छ ।
२. बिवाहमा आनन्द र रमाइलो मात्र हुँदैन, यसमा तनाव, बोझ र उतारचढाव पनि हुन्छन् । तर सिंगल लाइफमा न कुनै बोझ हुन्छ न कुनै तनाव । ३५ वर्षसम्म यस्तो ‘शान्तिपूर्ण’ जीवन बाँचिसकेपछि फेरि बिहेको झमेलामा फस्न को चाहला ?
३. बिवाहअघि एक किसिमले स्वतन्त्र भइन्छ । मन लागेको बेला घरबाट निस्किन सपिकन्छ, मन लागेको काम गर्न सकिन्छ, आफूखुशी घुम्न जान सकिन्छ, साथीहरु भेट्न सकिन्छ । तर विवाहित जीवनमा यति निस्फिक्री हुन सकिँदैन । यसले पनि ३५ कटेपछि विवाहमा निरुत्साहन पैदा गर्छ ।
४. सिंगल व्यक्तिलाई आफ्नो करिअर अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । तर वैवाहिक जीवनको वन्धनमा बाँधिइसकेपछि घर परिवारलाई पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ र करिअरमा फोकस गर्न सकिँदैन । ३५ पछि बिहे गर्न मन नलाग्ने यो पनि एउटा कारण हो ।
५. लामो समयसम्म सिंगल भइयो भने विवाहपछि आफ्नो पति वा पत्नीको अधिनमा बस्न कत्ति पनि रुची बाँकी रहँदैन ।
६. सिंगल हुँदाको सबैभन्दा ठूलो ‘फाइदा’ के हो भने कुनै पनि समयमा कोहीसँग पनि डेट गर्न सकिदैन । तर, बिहेपछि यस्तो असम्भव हुन्छ । यही भएर विवाह नगरी बस्नेहरु पनि छन् ।